Gawaarida gawaarida gawaarida, alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Soosaarayaasha gawaarida gawaarida
magaca sheyga: Qalabka giraanta gudaha 6CT
sumadda gaariga: Cummins
Lambarka agabka: 3415350 3415349
Moodooyinka gawaarida ku habboon: 6CT8.3
Dhamaadka soosaarka korontada ee crankshaft, taasi waa, dhinaca ay gearbox-ka iyo qalabka shaqada ku xirmaan ku xiran yihiin. Shaqada ugu weyn ee duulimaadku waa inuu keydiyo tamarta iyo firfircoonida bannaanka mashiinka istaroogga. Mashiinka afar-stroke, kaliya tamarta nuugista, riixitaanka, iyo qiiqa hal istaroog wuxuu ka yimaadaa tamarta ku keydsan flywheel-ka. Isku dheelitirka ayaa si qaldan loo saxay. Isku dheelitirka mishiinku wuxuu inta badan kuxiran yahay dheelitirka miisaanka. Mashiinka hal-dhululubo wuxuu leeyahay mashiinka dheelitirka ee gaarka ah.
Duulimaadku wuxuu leeyahay daqiiqad weyn oo firfircoon. Maaddaama shaqada silsilad kasta oo mashiinku joogsanayo, xawaaraha mishiinka sidoo kale wuu is beddelayaa. Marka xawaaraha matoorku kordho, tamarta firfircoonida duufku way sii kordheysaa, keydinta tamarta; marka xawaaraha mishiinku hoos u dhaco, tamarta firfircoonida ee duulista ayaa hoos u dhacda, iyadoo tamarta sii deysa. Duulimaadka duulimaadka waxaa loo isticmaali karaa in lagu yareeyo isbedbeddelka xawaaraha inta lagu jiro hawlgalka mishiinka.
Waxaa lagu rakibay dhamaadka dambe ee crankshaft mishiinka wuxuuna leeyahay firfircoonaan wareegsan. Shaqadeedu waa in la keydiyo tamarta mishiinka, lagana adkaado iska caabinta qaybaha kale, iyo in crankshaft uu si siman u wareego; ku xir mashiinka iyo gudbinta gawaarida adoo adeegsanaya xajmiga lagu rakibay wiishka; oo bilaw Mishiinku wuxuu ku hawlan yahay fududaynta bilaabida mishiinka. Waana isdhexgalka dareenka booska crankshaft iyo dareemida xawaaraha gaariga.
Xilliga korontada, tamarta uu u gudbiyo mashiinka crankshaft, marka lagu daro soo saarida banaanka, qeyb ka mid ah tamarta waxaa qaata duufaanta, si xawaaraha crankshaft uusan wax badan u kordhin doonin. Saddexda istaroog ee qiiqa, qaadashada iyo riixitaanka, duulimaadku wuxuu sii daayaa tamartiisa keydsan si uu u magdhabo shaqada ay wada cuneen saddexdaas istaroog, si markaa xawaaraha crankshaft uusan u yareynin wax aad u badan.
Intaas waxaa sii dheer, duulimaadku wuxuu leeyahay shaqooyinka soo socda: duufku waa qaybta firfircoon ee xajinta khilaafaadka; qalabka giraanta duulaya ee lagu bilaabayo mishiinka wuxuu ku dhegan yahay cirifka duuliyaha; calaamadda ugu sareysa ee dhimatay waxaa sidoo kale lagu xardhay duufaanta loogu talagalay jaangooynta Waqtiga Kicinta ama waqtiga mudista shidaalka, iyo hagaajinta nadiifinta waalka.